अष्ट्रेलियामा ट्रेन भित्रै युवतीकाे स्तःन समात्ने नेपाली युवक समातिए… – PathivaraOnline
Home > अपराध > अष्ट्रेलियामा ट्रेन भित्रै युवतीकाे स्तःन समात्ने नेपाली युवक समातिए…
अष्ट्रेलियामा ट्रेन भित्रै युवतीकाे स्तःन समात्ने नेपाली युवक समातिए…
admin February 14, 2020 अपराध, प्रवास	0
एजेन्सी /सिड्नी रेलमा मध्य रातमा महिलालाई काम वासनायुक्त तरिकाले छोएको अप राध स्वीकार गरेपछि एक नेपाली जेल सजायका भोग्नबाट मुक्त भएका छन् । यो घटना गत वर्षको अप्रिल २० मा चाट्सीवुड स्टेशनमा भएको थियो । महिलाले यो घटनाको बारेमा रिपोर्ट गरेपछि प्रहरीले उनलाई प क्रा उ गर्न सफल भएको हो । ३० वर्षीय उनी बिक्री गर्ने सहयोगीको रुपमा रहेका थिए । उनी हाल अस्थायी भिसामा रहेको डेली टेलिग्राफले जनाएको छ ।
तर उक्त समयमा आफू व्यापक नसामा भएको प्रहरीलाई बताएका छन् । अदालती कागजातलाई आधार मान्ने हो भने पीडित महिला रातको १ बजे एक्लै यात्रा गरिरहेकी थिइन् । उक्त समयमा अ प राधी उनीसँगै बसिरहेको र उनलाई चुम्बन गर्ने प्रयास गरेको थियो । उक्त मानिसले महिला यात्रुलाई अंकमालको गुडबाई गर्न सक्छु भनेर समेत सोधेका थिए । उक्त समयमा महिलाले आफ्नो बायाँ स्तन अठ्ठिएको महशुस गरेकी थिइन् ।
अदालतले पुरुषको काम वास्तवमै ग म्भीर भएको जनाएको छ । यसले महिलालाई एक्लै रेलमा यात्रा गर्नका लागि असुरक्षित बनाएको बताइएको छ । महिलाले नेपाली पुरुषलाई जेल सजायका लागि पठाउन आग्रह गरेकी छन् ।
बालुवाको ढिस्कोले पुरिएर कुवतेमा छ नेपालीको निधन, दुई घाइते
बालुवाको ढि”स्कोले पुरिएर कुवेतमा छ नेपालीको निधन भएको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले पुष्टि गरेको छ । निधन हुनेमा पाल्पाका एकबहादुर गाहा, सिरहाका गङ्गाराम चौधरी, ताप्लेजुङका वसन्त गुरुङ र दाङका श्यामनारायण चौधरी छन् । दुई मृ तकको पहिचान हुन बाँकी रहेको दूतावासले जनाएको छ ।
कुवेतबाट आयो यस्तो दुःखद खबर, ६ नेपालीकाे खाल्डोमा पुरिएरै गयो ज्यान!
पोखरामा सिरियल ह’त्याका”ण्ड : शुद्ध प्रेम गरेकि प्रेमिकाले अर्कैसँग लगनगाँठो कसेपछि गरिन् ह त्या योजना!
वैदेशिक रोजगारको लागि रसिया पुगेका नेपालीहरूकाे ज्यान नै ख’तरामा, पे’स्तोल प’ड्काएर तर्साउँछन् (भिडियो सहित)
बाहिर हल्ला चलेजस्तो सजिलो छैन जापान